lundi, 12 novembre 2018 07:56
Cérémonie du Centenaire des Troupes Malagasy : Honorer la mémoire
Dans le cadre de la célébration du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre de 1914-1918, l’Association CEFMAD, présidée par Christophe GASNOT, a organisé une cérémonie en hommage aux Troupes Malagasy, au Bois de Vincennes, le 10 novembre 2018.
A cette occasion, le ministre malagasy des Affaires Etrangères, Eloi Alphonse Maxime Dovo, représentant l’Etat malagasy, et les autorités françaises, dont le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et Madame le maire du 12ème Arrondissement de Paris, ont effectué un dépôt de gerbes de fleurs au Jardin d’Agronomie Tropicale où une stèle à la mémoire des Troupes Malagasy enrôlées pendant la première guerre mondiale est érigée.
10% de ces tirailleurs Malagasy, au nombre de 45 863 incorporés dans l’armée française à partir d’octobre 1915, ne sont pas revenus du front et reposent dans les nécropoles de différents pays comme la Grèce, l’Algérie ou la France.
lundi, 12 novembre 2018 07:55
Mpandraharahan'ny fonja: Niampy 200 mianadahy
Notanterahina ny faran'ny herinandro teo ny lanonana ara-miaramila namoahana ny andiany "RAITRA 2018", misy Mpandraharahan'ny fonja 200, ka lehilahy ny 140 ary vehivavy ny 60 hanatevina ireo efa amperinasa.
Tao amin'ny Sekolim-pirenena fanofanana Mpandraharahan'ny fonja (ENAP) Antetezambaro - Toamasina II ny lanonana mikasika izany.
lundi, 12 novembre 2018 07:31
Izay mamaly vokam-pifidianana aoka fatorana tady
Na mbola tsy feno aza ny vokam-pifidianana dia efa hita soritra fa hiditra fihodinana faharoa i 13 sy 25.
Ianareo roa tonta no mandrafitra ny governemanta ankehitriny, ianareo no nanapaka ny datim-pifidianana, ianareo no lehiben'ny sampadraharaham-panjakana rehetra, hatramin'ny fitantanam-bola.
Misy solotenanareo roa tonta ihany koa ao anatin'ny CENI, izay tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ny fifidianana.
Sady mpilalao ianareo izany, no mpikarakara, no arbitre.
Efa izay moa no nanaovanareo azy, ary efa hirosoatsika izao.
Aoka tsy aheno feo avy aminareo intsony izahay manakiana governemanta, na mitsikera sy manome tsiny ny CENI. Ianareo no ao anatiny ao, alamino any tokatranonareo.
Nanana fepotoana nomen'ny lalàna ianareo nitondra fitoriana any amin'ny HCC raha nisy tsy mety hitanareo.